Amandla oThengiso lwaBucala | Martech Zone
Uyakhumbula xa uNike wazisa umkhankaso wayo nje? U-Nike ukwazile ukufezekisa ulwazi kunye neqondo lophawu olukhulu ngesi slogan silula. Iibhodi zebhodi, umabonwakude, unomathotholo, uprinta… 'Yenze nje' kwaye i-Nike swoosh yayikuyo yonke indawo. Impumelelo yeli phulo yayixhomekeke ikakhulu ekubeni bangaphi abantu uNike abanokukwazi ukubona nokuva lo myalezo. Le ndlela isetyenziselwe uninzi lweempawu ezinkulu ngexesha lokuthengisa ngobuninzi okanye 'ixesha lephulo' kwaye ubukhulu becala yadibana nabathengi kwaye yaqhuba ukuthengisa. Ukuthengisa ngobuninzi kuyasebenza.
Ngokukhawuleza malunga neminyaka engama-30, ngena kwi-Intanethi, iifowuni eziphathwayo kunye namajelo eendaba ezentlalo, kwaye siphila kwixesha elahluke kakhulu. Umzekelo, abantu bachitha $ 25 yezigidigidi ekuthengeni okwenziwe kwiifowuni kunye neetafile ngo-2012 kuphela, I-41% ye-imeyile ivuliwe kwizixhobo eziphathwayo kwaye umntu ophakathi uchitha iiyure ezintandathu ngenyanga kuFacebook. Itekhnoloji yedijithali iyinxalenye yobomi babathengi kwaye ngenxa yoko, abathengi bafuna ngaphezulu kunxibelelwano lwabo neempawu. Bafuna ukuva iimveliso ezivela kwisiteshi esifanelekileyo, ngexesha elifanelekileyo kunye nemiyalezo efanelekileyo. Ukuxhasa oku, a Uphando lwabathengi lwamva nje ifumene oku kulandelayo:
Ukwanda komnqweno wabathengi wokuba nolwalamano lobuqu kunye neempawu ngokuqinisekileyo kuwutshintshile umdlalo wabathengisi. Kuthatha itekhnoloji ephucukileyo kunye nentengiso ekrelekrele ukuphuhlisa ubudlelwane bexesha elide nabathengi kunye nefuthe lomgca. Namhlanje, abathengisi kufuneka bahambise amava abo ngabathengi kwiindlela ezahlukeneyo zedijithali- kwaye kwinqanaba elikhulu.
I-MetLife ngumzekelo omhle. Ukuba umthengi undwendwela iwebhusayithi ye-MetLife ukubuza malunga nomgaqo-nkqubo we-inshurensi, emva kwezigcawu, bangena kwinkqubo ekhethekileyo eyilelwe ukunceda umthengi agqibe inkqubo enobunzima yamaxesha amaninzi. Iqala kwiWebhusayithi, kodwa ingaqhubeka nge-imeyile, ukubonisa kunye neSMS yezaziso kunye nezicelo zokulandela. Endleleni, umyalezo wenziwe ngokobuqu kwimeko nganye yomthengi ngamnye. Yenziwe kakuhle, le nkqubo ikhokelela kumava amakhulu kubathengi, ngelixa ikhuthaza umthengi ukuba agqibe inkqubo kwaye abe ngumthengi weMetLife. Kwimeko enjalo ngeMetLife, oku kulungiswa kwemiyalezo yentengiso kwizitishi zedijithali kunokwaneliseka okuphezulu kwabathengi kunakwinkqubo yesiqhelo, eqhutywa ziiarhente.
The Ukuphendula ngokuNxibelelana neLifu lokuThengisa Yakhelwe ukunceda abathengisi benze olu hlobo lokuthengisa orchestration. Iqonga lijolise ngokupheleleyo kubathengi, ichaza indlela abathengisi ababalaseleyo behlabathi abalawula ngayo ubudlelwane babo bedijithali kwaye bahambisa intengiso elungileyo kubathengi babo kwi-imeyile, iselfowuni, intlalontle, umboniso kunye newebhu. Kwaye, ibonelela ngamaqela entengiso ngesisombululo esinye, sokusebenzisana sokucwangcisa, ukwenza, nokwenza ngcono kunye nokucwangciswa kwamanqanaba amaninzi, iinkqubo zentengiso ezinqamlezileyo. Ilifu lokuThengisa eliDibeneyo lixhobisa abathengisi ukuba basebenzise idatha yabo, indlela yabo, ukuhambisa imiyalezo efanelekileyo egcina abathengi bezibandakanya kwaye bethenga kulo lonke ixesha lokuphila.
tags: uhloboemail Marketingurhweboimiyalezo yentengiso. imeyileNgokwezifisoIntengiso ye-imeyile eyenzelwe wenaimiyalezo ebhaliweyoiimpendulo